Editor Archives - Online Media
तपाईं अहिले Editor सम्बन्धी खबरहरु हेर्दै हुहुन्छ |
Editor, Headline, International, News Comments are Off
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: July 10, 2019 (10 Jul, 2019)
दक्षिण कोरियामा चार संचारकर्मी सम्मानित
दक्षिण कोरिया/शौल/ दक्षिण कोरियामा चार जना संचारकर्मी सम्मानित भएका छन । नेपाल तामाङ संघ दक्षिण कोरियाले आफ्नो बार्षिक साधारण सभामा संचार क्षेत्रका हस्तिहरुलाई सम्मान गरेको हो । कार्यक्रममा सम्मानित भएका पत्रकार किशोर ब्लोन नियोग सहित सैलुङअनलाइनका अमिर योञ्जन, तेमालअनलाइनका दुधबहादुर लामा, फोनिज कोरिया डटनेट तथा ओएमसी नेपालका विमल लामा दोङलाई संघले सम्मान गरेको थियो । उनीहरूलाई सम्मान–पत्र र खादा ओढाएर प्रमुख अतिथि/अतिथीहरुले सम्मान गरेका थिए । पत्रकार दुध लामा प्रवासमा
Editor, Headline, News, Politics, Thoughts Comments are Off
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: February 16, 2019 (16 Feb, 2019)
“अलमल हो या जनअपेक्षा आक्रोश ? खबरदारी गरौं !”
किशोर ब्लोन नियोग(केबी नियोग)/ दक्षिण कोरिया/ सिउल/ यो मुलुकमा परिवर्तन देख्न चाहने प्रत्येक राजनीतिक दलले सामन्तवादको सोच हटाउनु जरूरी देखिन्छ। प्रत्येक पलमा जनतालाई दु:ख दिएर अनि जनतालाई झुक्याएर देशले कॉचुली फेर्न सक्दैन । यो वा ऊ भन्ने नै छैन यहाँ त प्रत्येक दलमा संस्थागत रूपमा सामन्तवाद र निषेधको राजनीति झॉगिदै छ। चोखो म वा हानी भन्ने ठाउँ पनि सकियो । नाराले देश बन्दैन ,देश बन्न सोच बदल्नुपर्छ । प्रतिशोधको राजनीतिबाट
Arts, Editor, Headline, News Comments are Off
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: November 27, 2018 (27 Nov, 2018)
सरकारले लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना सफलताको हार्दिक शुभकामना- (नयॉ युगको एक शुरुवात)
किशोर ब्लोन नियोग (K B Niyog) / दक्षिण कोरिया/ ओली सरकार गठन भएको लामो समय बिति सक्दा पनि सरकारले रचनात्मक योजना नल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना व्याप्त थियो । सरकारमा रहेका नेकपा भित्र पनि आफ्नो नेतृत्वले काम गर्न नसकेको छिटफुट अन्तरविरोध बाहिरिए । आम नागरीकमा सरकार प्रति वितृष्णा पैदा भईसकेको अवस्था थियो । प्रतिपक्ष कांग्रेस त झन नचिँडिने कुरै भएन । विविध घट्ना तथा परिघट्नामा रुमलिएको सरकारले आज भने तामझामका साथ
Arts, Editor, Headline, International, News, Politics, Thoughts Comments are Off
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: November 25, 2018 (25 Nov, 2018)
”खोई ! खै सरकार ? समृद्धिको प्रत्याभूती।”
किशोर ब्लोन नियोग(KB Niyog)/दक्षिण कोरिया/सिउल/ मुलुकमा केन्द्र, संघिय र स्थानिय सरकार खडा भएको छ । जनता टुलुटुलु हेर्दैछन् । सरकार कता अलमलमा छन् भन्दा आत्युक्ती नहोला । यस अर्थमा सरकारको कृयाकलाप र तत्कालिन परिणामहरुमा जनताले त्यसको स्वभावलाई नियालिरहेको छ । यो सरकार लामो समय पछी स्थायी सरकार बने कै कारण जन आकांक्ष व्यापक रहेको हो । संघिय स्थायी राजधानीको निर्क्योल कहिले खोई ? रेल खै ? घरघरमा ग्यासको पाईपलाइन खै